कृषि – Page 13 – Halkaro
चितवन मत्स्य महोत्सव सुरु
चितवन, पुस १ । चितवनको भरतपुरमा शुक्रबारदेखि दोस्रो चितवन मत्स्य महोत्सव सुरु भएको छ । भरतपुरस्थित औद्योगिक प्रदर्शनी मैदानमा सुरु भएको महोत्सवको आज एक भव्य समारोहकाबीच कृषि राज्य मन्त्री राधिका तामाङले समुद्घाटन गर्नुभयो । महोत्सव समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै कृषि राज्य मन्त्री तामाङले कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषि नै नेपाल विकासको आधार […]
चितवनमा शुक्रबार देखि मत्स्य महोत्सव हुने
चितवन, मंसिर ३० । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवन र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनको संयुक्त आयोजनामा महोत्सव हुँदै छ । यही पुस १ देखि ५ गतेसम्म भरतपुरस्थित औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल मैदानमा महोत्सव हुन लागेको हो । ‘स्वदेशी माछा खाऔँ, स्वस्थ रहौँ’ भन्ने नाराका साथ हुन लागेको महोत्सवको भोली १२ बजे कृषि राज्य मन्त्री राधिका […]
सरकारले सिँचाइका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछः मन्त्री गिरी
मोरङ, मंसिर २७ । सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीले देशभरका किसानको सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । प्रेस युनियनले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गिरीले केही हप्तामै सिँचाइका विशेषज्ञको सम्मिलित टोली गठन गरी कार्यक्रम तयार गरिने बताए । देशका विभिन्न सिँचाइका असुविधा भएका ठाउँमा सिँचाइका कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको लक्ष्य […]
सडकमै तरकारी फालेर अान्दोलनमा उत्रिए व्यापारी
काठमाडौँ, मंसिर २५ । राजधानीको नयाँ बानेश्वर–मिनभवनस्थित तरकारी बजारका व्यापारीले हजारौँ मूल्य बराबरका तरकारी सडकमा फालेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले शनिबार बिहान ९ बजेदेखि बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पूर्बी भागको सडक अवरुद्ध गर्दै बिक्रीका लागि ठिक्क पारेको तरकारी सडकमा फालेर बिरोध गरेका हुन् । नागरिक लगानी कोषले तरकारी बजार खाली गराउन आज डोजर ल्याँउदै […]
अखिल नेपाल किसान महासंघ संविधान संशोधन विधेयकको विरोध
काठमाडौँ, मंसिर २४ । अखिल नेपाल किसान महासंघले संविधान संशोधन विरूद्ध माउ पार्टी एमालेले सञ्चालन गरेको अान्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने निर्णय गरेको छ । महासंघका अध्यक्षा तथा एमाले उपाध्यक्षा बामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तै निर्णय गरेको हो । बैठकले गरेका निर्णयहरूः १. हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि चार महिने अभियान’ […]
कृषि उत्पादन विषयमा छलफल
चितवन, मंसिर १८ । चितवन शान्ति समाजले शनिबार नारायणगढमा जिल्लास्तरिय कृषिका उत्पादन र उत्पादकत्वका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो समाजले जिल्ला स्तरिय राजनितिक समाज प्राज्ञिक समाज तथा जमिन जल उद्यम समाज र उद्योग व्यवसायी समाज बिच उत्पादन बृद्धिका सम्बद्ध छलफल गरेको हो । सो छलफल कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी बरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दर […]
विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह मनाइँदै
काठमाडौँ । कृषि विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालयले शनिबारदेखि यही मङ्सिर २५ गतेसम्म विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह मनाउने भएको छ । निर्देशनालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी किसान, व्यापारी, उपभोक्ता लगायत सरोकार भएकाहरुलाई सचेत गर्ने उद्देश्यले सप्ताह मनाउन लागेको बताएको छ । नेपालमा भित्रिने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत तरकारी प्रणालीमा आधारित सघन खेती भएका स्थानमा प्रयोग भइरहेको निर्देशनालयका […]
विभागिय प्रमुखहरुलाई स्वागत तथा सम्मान
चितवन, मंसिर १२ । नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्च चितवनले पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुलाई स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. विमल कुमार निर्मल, कृषि तथा वन विश्व विद्यालयकि पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान शंकायका डिन शारदा थपलिया, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख डा. वरिष्ठ […]